के सरकारले सूचना बेच्न मिल्छ ?
- राजेश शर्मा | साेमबार, चैत २१, २०७८
यात्रामा धेरैको साथी हो गीतसंगीत । बिहान कार्यालय जाँदा होस् या बेलुका घर फर्किंदा, मेरो गाडीमा एफएम बज्छ । राम्रो गीत र कहिलेकाहीँ ट्राफिक अपडेट लिन एफएम चेन्ज गरिरहन्छु । एफएममा बजेको एक सन्देशले मेरो ध्यान तान्यो । एकछिन म अक्क न बक्क भएँ । के होला यो भनेर चारैतिर दिमाग घुमाउन थालेँ । सन्देश अचम्मको थियो । त्योभन्दा पनि अचम्म त्यो सन्देश जारी गर्ने संस्था कार्यालयको नाम सुनेपछि म झनै झस्किएँ ।
गाडी रोकेर पत्रकारिताका प्राध्यापकलाई फोन गरेँ र सोधेँ, 'एफएममा आइरहेको यो सन्देशका बारेमा हजुरको धारणा के छ ?'
प्राध्यापकले भने, ‘त्यो गलत हो, कानुनी हिसाबले पनि गलत छ ।’
यसपछि मैले सञ्चारमाध्यममा क्रियाशील साथीहरूलाई सोधेँ, 'के हो यो ? सबैले यो गलत हो भने ।’ त्यो दिन एफएममा प्रसारित सन्देश थियो, ‘आत्महत्या समस्याको समाधान होइन, अमूल्य जीवन त्यसै खेर नफालौँ । नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड ।’
यो सन्देशमा महत्त्वपूर्ण दुई पाटाहरू छन् । पहिलो यो सन्देश प्रसारण गर्न योग्य छ या छैन । २० वर्षअघिदेखि नै विकसित मुलुकहरूमा आत्महत्याका समाचार लेख्न छाडिसके । कतिले यसलाई बहसमा ल्याउन जरुरी नै छैन पनि भन्छन् । यो विषयमा छुट्टै चर्चा होला । यसको दोस्रो पाटो यो सन्देश हो कि विज्ञापन ? यही विषयमा यो लेख लेख्न खोजिएको हो । अर्थात् अहिले सञ्चारमाध्यममा आइरहेका सरकारी सन्देशहरू के विज्ञापन हुन् या सरकारले नै सन्देश होइन, यी बेचबिखनका सामग्री हुन् भन्न खोजेको हो ? यही विषयमा यो लेख केन्द्रित छ ।
नेपाल सरकारले सञ्चार मन्त्रालयमार्फत सञ्चारमाध्यमहरूलाई उपलब्ध गराउने गरेको लोककल्याणकारी विज्ञापन अहिले केही सञ्चारमाध्यमहरूमा देख्न सकिन्छ । ती सामग्रीहरू विज्ञापन हुन् या सन्देश भन्ने विषयमा बहस गर्नु जरुरी छ । र, त्यो बहस निम्त्याएको छ– विज्ञापन बोर्डले । संविधान दिवस मनाऔँ भन्न पनि विज्ञापन चाहिने हो र ? हैन भने २०७८ असोजमा सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन बोर्डले उपलब्ध गराएको विज्ञापनमा हेरौँ:
‘सातौँ संविधान दिवस राष्ट्रिय दिवसको रूपमा हर्षोल्लासका साथ मनाऔँ,
घरघरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराई दीप प्रज्वलन गरौँ । नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड ।’
यस्तै अर्को सामग्री बज्छ एफएममा, ‘हे...सानातिना कुरामा नि खोज्न हुन्न निहुँ, ख्यालख्यालैमा सुरु हुन्छ झगडाको बिउ, झगडाले...., मेलमिलाप गरौँ मेलमिलाप केन्द्रमा गई रिस फालौँ ...., नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड ।’
‘भ्रष्टाचार कानुनी, सामाजिक र नैतिक अपराध हो । नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड ।’
यी केही प्रतिनिधि सामग्रीहरू हुन् । लोक कल्याणकारी विज्ञापनका नाममा सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराइरहेको छ र प्रकाशन, प्रसारण भइरहेका छन् । जनतालाई सूचना, जानकारी दिने सामग्रीहरू पनि विज्ञापनका साधन हुन् ? किन विज्ञापन बोर्डले सन्देशहरूलाई बेचिरहेको छ ?
विज्ञापन बोर्डले भन्न सक्छ, 'सञ्चारमाध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रूपमा केही रकम उपलब्ध गराइएको छ र त्यहीबापत यी सन्देशहरू प्रकाशन प्रसारण भइरहेका छन् । तिनै सन्देशहरू विज्ञापन हुन् या होइनन् भन्ने विषयमा पहिला प्रस्ट हुन जरुरी छ । विज्ञापन हुन् भने ती प्रकाशन प्रसारण हुने तरिका फरक होला । हैन सन्देश हुन् भने त्यो विज्ञापनको रूपमा किन प्रकाशन प्रसारण भइरेको छ ? 'हावा हुरीबाट बचौँ, वनजंगल डडेलो लाग्नबाट जोगाऔँ । मानव बेचबिखन अपराध हो । साबुनपानीले हात धुनुपर्छ । खोप लगाउनुपर्छ' भन्ने सामग्रीहरू के विज्ञापन हुन् त ? सार्वजनिक सरोकार र सन्देशमूलक सामग्रीलाई संस्थाको नामका खातिर विज्ञापन बोर्डले विज्ञापनका सामग्री बनाउन मिल्छ ?
कुन सामग्री वा सन्देश कुन कार्यालयबाट जारी भएको, त्यो कुन संस्थासँग सम्बन्धित छ भन्ने सूचना लुकाउन मिल्छ ? 'लिङ्ग पहिचान गरी भ्रूण हत्या नगरौँ, छोराछोरीबीच विभेद नगरौँ' भन्ने सूचना विज्ञापन हो भन्ने स्थापित गर्दा कसलाई के फाइदा हुन्छ ? जनतालाई विज्ञापन हो यो भन्ने सन्देश दिने हो कि सूचना, जानकारी र त्यसको प्रभावका बारेमा बताउने हो ?
यही सन्देशलाई विज्ञापनको रूपमा राखेर नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिलाई विज्ञापन बोर्डले २३ पुस २०७८ मा एक पत्र लेखेको छ । २०७९ सालको पात्रोमा राखिने विज्ञापनहरू भनेर नमुना पठाइएको छ । त्यो पत्र हेरिपछि त्यहाँका एक पदाधिकारीले भने, ‘विवाह लगायत अन्य भोज भतेरमा फजुल खर्च नगरौँ सभ्य र जिम्मेवार नागरिकको परिचय दिऔँ भन्ने सन्देश पनि विज्ञापनको रूपमा छाप्नुपर्ने भयो । कस्तो व्यवस्था आएछ हाम्रो देशमा ।’
उनको सवाल सुनेपछि फेरि प्रस्ट पार्न मैले आग्रह गरेँ । त्यसपछि उनले भने, ‘जुन मन्त्रालयको कुरा हो, उसैको नाम राख्न छाडेर यो विज्ञापन बोर्ड किन लेखेको होला ? सन्देश, जानकारी भन्ने नै रहेन, अब सबै विज्ञापन भयो । अब हुँदाहुँदा छोराछोरी पाल, बाबाआमाको हेरचाह गर भन्न पनि विज्ञापन चाहिन्छ भन्ने स्थापित गर्न खोजिँदै छ । किन यस्तो भइरहेको छ ?'
कोरोनाजस्ता महामारीबाट बच्ने सन्देशहरू वर्गीकरणमा परेका वा पारेका सञ्चारमाध्यमहरूलाई मात्र दिएर जनतामा पुग्दैन । सञ्चारको मूल हिस्सा नै वर्गीकरणसँग सन्तुस्ट छैन । र, त्यो प्रक्रियामा संलग्न नै छैनन् । त्यस कारण विज्ञापन बोर्डले दिने विज्ञापन उसले प्रसारण गर्दैन, जसको प्रत्यक्ष असर जनतालाई पर्छ । यो विषयमा पनि बेलैमा सोच्नुपर्छ ।
सत्य यही हो । विज्ञापन बोर्डलाई नाम चाहिएको हो कि जनतालाई सन्देश ? महत्त्वपूर्ण सवाल यहीँनेर छ । वन मन्त्रालयको सन्देश वन मन्त्रालयकै नाममा प्रसारण हुँदा किन विज्ञापन बोर्डलाई असर गर्छ र ? कृषिको सन्देश कृषि मन्त्रालयकै नाममा प्रसारण हुनुपर्ने हैन ? स्वास्थ्यको सन्देश त अरुबाट जारी हुन पनि सक्दैन । त्यही भएर स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएको छ, स्वाथ्य शिक्षा तथा सूचना सञ्चार केन्द्र ।
निजी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले जारी गर्ने स्वास्थ्य सन्देशहरू पनि यो कार्यालयबाट स्वीकृत प्राप्त भएपछि मात्र प्रसारण वा प्रकाशन हुँदै आएका छन् । यसको एउटै कारण हो संवेदनशीलता । यही कार्यालयको सन्देश अहिले विज्ञापन बोर्डको नाममा प्रसारण भइरहेको छ । लाजमर्दो विषय हो यो । नेपाल सरकारले जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, महासन्धिहरूअनुसार मात्र होइन, स्थापित नजिरअनुसार पनि यो गलत छ ।
अधिनायकवाद राजनीतिमा मात्र हुँदैन । अहिले विज्ञापन बोर्डले जे गरिरहेको छ, त्यो संविधानको खिलाफमा मात्र छैन, अधिनायकवाद उन्मुख छ र यसले कार्टेलिङतिर लैजान्छ । र, सूचना बेचबिखनका लागि लिलामी हुन्छ । सरकारको लोगोमा सूचना बेचिने देश भनेर विश्वभर नेपालले बदनामी कमाउनेछ ।
सञ्चारमाध्यममा प्रसारण प्रकाशन भइरहेको सन्देश वा विज्ञापन कुन निकायको हो भनेर थाहा पाउनु नेपाली नागरिकको अधिकार हो । नेपालको संविधानको मौलिक हकको खिलाफमा विज्ञापन बोर्ड जान सक्दैन । स्वयम् विज्ञापन बोर्डको काम कर्तव्य अधिकार पनि त्यो हैन । विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ को दफा १५ अनुसार सञ्चारमाध्यमलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सार्वजनिक हितसम्बन्धी सन्देश, विज्ञापन बोर्डमार्फत समानुपातिक वितरण गर्ने । वितरण गर्ने भनेको आफ्ना नाममा उत्पादन गर्ने र वितरण गर्ने त हैन होला नि ? बालबालिका, महिला, स्वास्थ्य, शिक्षा कृषि, वन सबैको सन्देश विज्ञापन बोर्डका नाममा प्रसारण हुने हैन, उसले त समानुपातिक रूपमा वितरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो विषयमा पनि फरक मतहरू छन् ।
नेपालको संविधानअनुसार ‘अपाङ्ग’ भन्न मिल्दैन, अपाङ्गता भन्नुपर्छ । तर, धुम्रपानसम्बन्धी विज्ञापनमा ‘अपाङ्ग’ भनी प्रसारण भइरहेको छ । संवेदनशीलता यस्तै विषय वस्तुहरूमा चाहिने हो । यो विज्ञापन रेडियोमा सुनेपछि कति मानिसले सम्बन्धित कार्यालयमा भन्न खोजे होलान् तर कहाँ भन्ने ? त्यो कुन मन्त्रालय, विभागको सन्देश हो भन्ने खुलाउनु पर्दैन ? यस्ता कति सवालहरू छन् । जुन जनताको सुसूचित हुन पाउने अधिकारको खिलाफमा काम भइरहेको छ ।
अर्को पाटो हेरौँ अब । नेपाल सरकारका हरेक मन्त्रालय र अन्तगर्तका विभाग, संस्थान, समिति, बोर्डहरूको कार्यक्षेत्र तोकिएको हुन्छ । ती कार्यालय मन्त्रालयहरूले आफ्नो संस्थाको प्रवर्द्धन गर्न पाउँछन् । संस्थालाई बलियो, सबल बनाउन पाउँछन् । बलियो अख्तियार चाहिन्छ भनेर आन्दोलन भएको हैन ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम के हो भन्ने सबै जनतामा जानु राम्रो हो कि त्यही अख्तियारले उपलब्ध गराएको भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो भन्ने सन्देश विज्ञापनको रूपमा विज्ञापन बोर्डको नाममा प्रसारण हुनु ? जनताका लागि मात्र होइन, स्वयम् अख्तियारको सवलीकरणमा कुन उपयुक्त हो, अख्तियारकै नाममा सन्देश जारी हुनु कि विज्ञापन बोर्डको नाममा ?
लोक कल्याणकारी विज्ञापनका नाममा सन्देशहरू खुम्चिएको पक्षलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । कुनै सन्देशहरू यस्ता हुन्छन् जुन धेरैभन्दा धेरैमा पुग्नुपर्छ । कोरोनाजस्ता महामारीबाट बच्ने सन्देशहरू वर्गीकरणमा परेका वा पारेका सञ्चारमाध्यमहरूलाई मात्र दिएर जनतामा पुग्दैन । सञ्चारको मूल हिस्सा वर्गीकरणसँग सन्तुस्ट छैन । र, त्यो प्रक्रियामा संलग्न नै छैनन् । त्यस कारण विज्ञापन बोर्डले दिने विज्ञापन उसले प्रसारण गर्दैन, जसको प्रत्यक्ष असर जनतालाई पर्छ । यो विषयमा पनि बेलैमा सोच्नुपर्छ ।
कसैले घुस मागे सम्पर्क गर्ने निकाय विज्ञापन बोर्ड हो कि अख्तियार ? चोरी भयो भने उजुरी गर्ने प्रहरीमा हो कि विज्ञापन बोर्डमा । एकद्वार प्रणालीको नाममा जनताको सूचनाको हक रोक्न पाइन्छ ? मन्त्रालय, विभागको सवलीकरण रोक्न मिल्छ ? अहिले प्रकाशन प्रसारण भइरहेका सरकारी सन्देश विज्ञापनले त्यही भनिरहेको छ । पत्रिकामा मदिराको खुलेआम विज्ञापन भइरहेको छ । टीभीमा मदिराको विज्ञापन भइरहेको छ । खेलकुद, होली, महोत्सव जे–जस्ता कार्यक्रमको प्रायोजक भएर भए पनि मदिरा, चुरोटहरूले विज्ञापन गरिरहेका छन् । यसतर्फ विज्ञापन बोर्डको ध्यान किन जाँदैन ? किनभने यसबाट व्यापारिक घरानासँग द्वन्द्व हुन्छ ।
उता सरकारी कार्यालयको सन्देश कार्टेलिङ गर्न सक्यो भने सञ्चारमाध्यमसँग साखिले हुन पाइन्छ वा अरु स्वार्थहरू पनि राख्न सकिएला । हैन भने किन सन्देशलाई विज्ञापनका रूपमा प्रसारण गर्नुपर्ने ? किन विज्ञापन बोर्डले वितरणको मात्र काम गर्न सक्दैन ? किन सहजीकरण गर्नेतर्फ नगई किन सरकारी सूचना सन्देश बेचबिखनमा लाग्छ ? के हो अधिनायकवाद ? के हो सूचनाको हक ? गर्मी सिजनमा लाग्ने पानीजन्य रोग र यसबाट बच्न के के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भन्ने जानकारी के नेपाली नागरिकले अब नपाउने नै हुन् ? वा त्यो जानकारी बजारमा लिलामी भएजस्तो विज्ञापनको सामग्रीको नाममा विज्ञापन बोर्डले उपलब्ध गराउने विज्ञापनकै रूपमा बुझ्ने हो ? वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकाहरूले पनि के अब विज्ञापन बोर्डमा सम्पर्क गर्ने हो ? हैन भने किन जुन कार्यालयको सन्देश हो, त्यही कार्यालयको नाममा जारी गर्न किन विज्ञापन बोर्ड सहमत हुँदैन ? किन उसलाई आफ्नै नाम चाहिन्छ ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २१, २०७८, ०८:३१:००